Hub Mareykanka uu iibinayo oo ka careeysiiyay Shiinaha - Radio Risaala: Somali News Online
Home Caalamka Hub Mareykanka uu iibinayo oo ka careeysiiyay Shiinaha
Hub Mareykanka uu iibinayo oo ka careeysiiyay Shiinaha
Dowladda Mareykanka ayaa Congress-ka ku wargelisay suurta-galnimada inay Taiwan ka iibineyso gantaallada biyaha hoostooda ku safra oo ku kacaya 180 milyan oo dollar, taasi oo sii xumeyneysa xiriirka Washington iyo Beijing.
Dowladda Mareykanka, si la mid ah inta badan dalalka caalamka, wax xiriir diblomaasiyadeed oo rasmi ah lama lahan Taiwan, hase yeeshee waxaa jira sharci ku qasbaya inay ka iibeyso hub ay isku difaacdo.
Waaxda Arrimaha Dibedda Mareykanka ayaa ansixisay iibka gantaallada 18 MK-48 Mod6 ee maraakiibta badda laga rido oo casri ah, kuwaas oo ku kacaya 180 milyan oo dollar, sida ay sheegtay Hay’adda Iskaashiga Difaaca Amniga Mareykanka, oo bayaan soo saartay.
Hay’adda ayaa sheegtay in iibkan uu u adeegayo danta qaran, amni iyo dhaqaale ee Mareykanka, islamarkaana ay ku wargelisay Congress-ka.
Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibedda Shiinaha Zhao Lijian ayaa sheegay in Shiinaha ay ashtako rasmi ah oo arrintan ka dhan ah u gudbiyeen Washington.
Zhao ayaa intaas ku daray in Shiinaha ay ku booriyeen dowladda Mareykanka inay joojiso dhammaan hubka ay ka iibiso iyo xiriirka militari ee ay la leedahay Taiwan, si looga hortago dhaawac kale oo gaara xiriira labada dal.
Taiwan ayaa sheegatay inay tahay dal madax-banaan, halka Shiinaha ay u arkaan gobol ka tirsan.
Previous articleDHAGEYSO:-Warka Duhur ee Radio Risaala 21-05-2020
Next articleMaamulka Gobolka Banaadir oo lagu wareejiyay Agab looga hortago Covid-19
Madaxweynaha Hir-Shabeelle oo Magacaabis sameeyey
Spain oo u baroordiiqeysa dadkii kaga dhintay Cudurka Corona virus
Puntland oo la gaarsiiyay qalabka lagu dagaallamo Covid 19
DHAGEYSO: Warka Habeen 27-5-2020
Dadka uu soo ritay Cudurka Covid 19 ee Soomaaliya oo gaartay 1,731
Amb Gelle:” Ku macaansiga iyo isku dhejinta awoodda iyo in aad taariikhda ku waarto adigoo ammaanan isma keenayaan mudane madaxweyne “
DHAGEYSO: Warka Duhur ee Radio Risaala 27-05-2020
DHAGEYSO: Warka Habeen 26-5-2020
DHAGEYSO:-Warka Duhur ee Radio Risaala 26-05-2020
DHAGEYSO:-Warka Subax ee Radio Risaala 26-05-2020
DAAWO:-Hoobiyeyaasha lagu garaaco Muqdisho oo kordhay & DFS oo ka aamusan
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Hirshabeelle Dr Maxamed Cabdi Waare ayaa magacaabay Guddiga Wasaaradaha ee Mashaariicda Xalalka Waara. Wareegto kasoo baxdey xafiiska Madaxweyne Waare ayaa lagu sheegay...